“Waan tebnay Cristiano Ronaldo inaan booskiisa buuxinana aad ayay u adag tahay” –Luka Modric – Gool FM
“Waan tebnay Cristiano Ronaldo inaan booskiisa buuxinana aad ayay u adag tahay” –Luka Modric
Haaruun March 4, 2019
(Madrid) 04 Maarso 2019. Kubbad sameeyaha kooxda Real Madrid iyo xulka Croatia Luka Modric ayaa ka dhawaajiyay in ay si weyn u tabeen weeraryahankii hore ee naadiga Cristiano Ronaldo, kaasoo dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore ku biiray kooxda Juventus ee Talyaaniga.
Ronaldo oo 5 jeer ku guuleystay xidigga ugu fiican caalamka ayaa waxaa Juventus ay kula wareegtay 100 milyan oo Euro, iyadoo wixii waqtigaa ka dambeeyayna aysan Real Madrid soo iibsan weeraryahan heer sare ah oo u qalma inuu buuxiyo booskii CR7.
Modric oo u warramayay wakaaladda AFP ayaa waxa uu yiri “Ronaldo waa laacib ay koox walba tabayso, aad ayaan u tebnay annaga, booskiisii inaan daboolnana aad bay u adag tahay”.
“Markii uu Juventus tegay, kooxda Madrid waxay ku fikireysay in howsha gool dhalinta ay u kala qaybiso dhaliyeyaasha naadiga, hase yeeshee arrintu sahal ma ahan, maxaa yeelay Ronaldo wuxuu dhalin jiray 50 gool xilli ciyaareed walba, mana heysanno laacib goolashaasi noo dhalin kara” ayuu sii raaciyay Modric.
Luka Modric wuxuu carrabka ku dhuftay in Ronaldo uu yahay xiddig taariikhdiisu weli ka muuqato naadiga Real Madrid, wixii uu kooxda gaarsiiyayna ay ka muuqdaan khasanadda naadiga.
Dhanka kale Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu hoggaaminayaa gool dhalinta Serie A-da Talyaaniga, isagoo leh 19 gool.
Bale oo gurigiisa iska aaday iyadoo aysan dhammaan ciyaartii El Classico
Jose Ferreira Neto "Neymar ciyaaryahan ma ahan ee waa…